Rasuul - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Sadex Rasuul)
Maqaalkaan waa tix ka mid ah tixaha:
Rumaynta Kutubta Alle
Rumaynta Qadarta iyo Go´aanka
Qirista in aanuu jirin ilaah marka laga reebo alle Muxamed uu yahay rasuulka
Shaqsiyaad Muhiim ah
Nabiyada iyo Saalixiinta
Taariikh iyo Juqraafiga
Mgaalooyin Muqadas Ah
Maka Al-Mukarama • Madiina Al-Munawara
Masjid al-Xaram • Masjidka Nabiga
Khilaafada Raashida • Khilaafada Umawiyiinta
Khilaafada Cabaasiyiinta • Khilaafada Faadimiyiinta
Maka • Shaam • Ciraaq • Faaris
Masar • Andolus • Jaal
Qusdandiin • Koonfur Itaaliya • Hindiya
Islaamka iyo Aduunka
Islaamka iyo Yurub
Islaamka iyo Afrika
Islaamka iyo Aasiya
Islaamka iyo Ameerika
Sidoo Kale eeg
Islaamka iyo Diimaha kale
Rasuul Ras'uul Nabi Nebi (ingiriis: Apostle, Prophet; carabi: ﻧﺒﻲ, "Nabiyu"; wadar الأنبیاء, loogu dhawaaqo "Al-Anbiyaa"; sidoo kale: ﺭﺳﻮﻝ, "Rasuul"; wadar ahaan: الرسل; "Ar-Rasul"; Greeg: ἄγγελος, ä'n-ge-los; Hebrew: מלאך, mal·äk) waa nin karaamaysan oo Ilaahay (s.w) u soo diray dad, qoom, shacab ama qoomiyad. Rasuul kasta waxaa loo soo diray in uu baro, u digo, isla markaana hogaamiyo bulsho dad ah. Tirada Rasuusha ee Alle u soo diray shacabka, qabiilada iyo bulshooyinka dunida aad ayay u faro badan yihiin; sidoo kale, wakhtiyada ay soo baxeen aad ayay u kala duwan tahay. Sida ay qabaan khubarada aqoonta fiican u leh diinta Islaamka isticmaalka Rasuul iyo Nebi way kala duwan tahay, inkastoo guud ahaan labada erey loo adeegsado si isku dhow amaba isku mid ah. Sida ku xusan kitaabka Quraanka kariimka ah ee saldhiga u ah diinta Islaamka, waxaa jira in ka badan 110,000 oo Nabi kuwaasi oo Ilaahay u soo diray shacabyo iyo qoomiyado kala duwan oo ah dad iyo jini. Laakiin Rasuusha Alle soo diray ee ku xusan kitaabka Quraanka Al-Furqaan ee diinta Islaamka waa shan Rasuul oo kutub leh iyo sadex Rasuul oonaan aqoon u lahayn kutubta lagu soo dejiyay. Waxayna kala yihiin: Nebi Ibraahim, Nebi Muuse, Nebi Daa'uud, Nebi Ciise, Nebi Muxamed . Rasuul kale oo aynaan aqoon iyo cilmi toona u lahayn kitaabta Alle ku soo dejiyay, waxaana ka mid ah: Nebi Ismaaciil, Nebi Yacquub, Nebi Yoonis.
Kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka waxaa ku xusan tiro 25 Rasuul iyo Nabi kuwaasi oo ugu horeeyo aabaheen Nebi Aadam (c.s) uguna dambeeyo nabiga lagu soo khatimay anbiyada iyo rususha waa Nebi Muxamed . Intaasi waxaa dheer, Nebiyada iyo Rusushu waxaa Alle (s.w) u soo diri jirey qoomiyado kala duwan oo deegaano kala duwan ku nool, kuwaasi oo ku fasahaadey ama ka jeestay cibaadadii iyo diintii Alle u soo diray. Marka nebiyada iyo rusushu waxay ahaayeen kuwa dadka uga diga xumaha isla markaana fara wanaaga iyo wadada toosan.
Guud ahaan, sida ku cad kitaabka Quraanka kariimka ee aasaaska u ah diinta Islaamka, Ilaahay sareeye wuxuu soo dejiyay afar Kitaab oo la kala siiyay afar Rasuul. Kutubtaasi waxay kala yihiin:
Kitaabka "Al-Furqaan" ee lagu soo dejiyay Nebi Muxamed
Kitaabka "Injiil" ee lagu soo dejiyay Nebi Ciise
Kitaabka "Towraad" ee loo soo diray Nebi Muuse, iyo
Kitaabka "Sabuur" ee Ilaahay ku soo dajiyey Nebi Daa'uud.
Guud ahaan, sida ku xusan diinta Islaamka, diinta Masiixiyada, iyo tan Yuhuuda, anbiyada waxaa ugu horeeyay isla markaana aabe u ah Nabi Aadam C.S. oo ah aabaha dhamaan dadka. Nabiyada Alle (s.w) soo diray waxaa ugu dambeeyay Nebi Maxamed (c.s.w) oo ka soo baxay qabiilka qureeysh sanadkii 570kii taariikhda miilaadiga ah.
1 Rasuul iyo Nabi
2 Jadwalka Nabiyada Ku Xusan Quraanka
3 Shaxda Nabiyada iyo Kutubtooda
4 Qoraalo La Mid Ah
Rasuul iyo Nabi[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Nebi Ibraahim (nabadgelyo korkiisa ha ahaatee).
Nebi Muuse (nabadgelyo korkiisa ha ahaatee).
Markaan tixraacno sida diinta Islaamku xustey, Nebi waa qof (labka dadka) nin ah ka soo jeeda tafiirtii Nebi Aadam (lagu daro Nabi Aadam laftiisa) kaasi oo Alle (s.w) ku soo dejiyay waxyi iyo amar lagu faraayo in uu u digo, wax-baro, isla markaana hogaamiyo reer, qabiil, bulsho, qoom, dad ama shacab asago oo tixraacaya kitaab Alle ku soo dejiyay asaga ama Rasuul ka horeeyay. Dhinaca kale, Ras'uul waa waa qof (labka dadka) nin ah ka soo jeeda tafiirtii Nebi Aadam kaasi oo Alle (s.w) u soo dhiibay fariin, laga yaabaa in kitaab lagu soo dejiyay ama aanan wax kitaab ah loo soo dirin, si uu hogaamiyo una fahansiiyo awooda weyn ee Alle. Haddii aanu qofkaasi wadin fariin uu gaadhsiinayo dad, shacab ama bulsho ninkaasi wuxuu ahaanayaa Nebi. Sidaasi daraadeed Rasuul kasta waa Nebi, laakiin Nebi kasta ma ahan Rasuul.
Waxaa jira dad badan oo Alle (s.w) soo diray kuwaasi oo ah Rasuul, Nebi ama labadaba. Tusaale ahaan, Nebi Muxamed waa Ras'uul iyo Nebi, halka Nebi Yuusuf, tusaale ahaan, yahay nabi oo kali ah. Dhinaca kale, Nebi Daa'uud wuxuu ahaa nin Rasuul iyo Nebi ah oo lagu soo dejiyay kitaabka Sabuur, halka wiilkiisa Nebi Suleymaan ahaa nebi oo kali ah. Inta u badan Rasuushu waxaa lagu soo dejiyay kitaab ay ku xusan tahay shariicada iyo qawaaniinta bulshada lagu maamulayo, halka Nebiyadu ay dadka barayeen kitaabta lagu soo dejiyay Rasuusha ka horeeysay.
Rasuusha Alle soo diray ee ku xusan kitaabka Quraanka Al-Furqaan ee diinta Islaamka waa shan Rasuul oo kutub leh iyo sadex Rasuul oonaan aqoon u lahayn kutubta lagu soo dejiyay. Waxayna kala yihiin:
1. Nebi Ibraahim oo lagu soo dejiyay Suxufta Ibraahim loona soo diray qoomkii ama shacabkii reer Ibraahim.
2. Nebi Muuse oo Alle (s.w) ku soo dejiyay kitaabka Towraad isla markaana loo soo diray qoomkii reer bani Israa'iil ee wakhtigaasi ku hoos jiray boqorkii Fircoon ee maamulayay dalka Masar iyo agagaarkeeda.
3. Nebi Daa'uud oo Ilaahay koreeyee u soo waxyooday kitaabka Sabuur si uu ugu digo isla markaan, u fahansiiyo weynida Alle, xaqa u tuso ugana reebo xumaanta, isla markaana ugu hogaamiyo wadada saxda ah ee Ilaahay faray qoomkaasi.
4. Nebi Ciise wuxuu Rabbi (subxaanahu wa tacaalaa) ku soo dejiyay kitaabka Injiil si uu u baro cabsida Alle.
5. Nebi Muxamed oo Alle (s.w) ku soo dejiyay kitaabka Quraanka ee lagu magacaabo Al-Furqaan. Nebi Muxamed waa Rasuul iyo Nebi loo soo diray dhamaan shacabka, bulshooyink, qabiilada iyo dadka ku nool caalamka, taasi oo ah mid ka duwan Nebiyadii iyo Rusuushii ka horeeysay ee Alle soo diray.
6. Rasuul kale oo aynaan aqoon iyo cilmi toona u lahayn kitaabta Alle ku soo dejiyay, waxaana ka mid ah:
Nebi Ismaaciil oo ah wiilka Nebi Ibraahim kaasi oo ka mid ah rasuusha Alle soo diray, in kastoo aynaan aqoon u lahayn diinta lagu soo dejiyay. Nebi Ismaaciil waa aabaha ay ka soo tafiirmeen dhamaan dadka Carabta ahi.
Nebi Yacquub oo asaga laftiisu ah wiilka Nebi Ibraahim kaasi oo ka mid ah rasuusha Alle soo diray, in kastoo aynaan aqoon u lahayn diinta lagu soo dejiyay. Nebi Yacquub waa aabaha ay ka soo tafiirmeen dadka Yuhuud ah.
Nebi Yoonis wuxuu ka mid yahay rasuusha Alle soo diray, in kastoo aynaan aqoon u lahayn diinta lagu soo dejiyay.
Jadwalka Nabiyada Ku Xusan Quraanka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Nebiya Ilaahay (s.w,t) ku sheegay kitaabka Quraanka kariimka ah ee lagu soo dejiayay Nebi Muxamed waa 25 Nabi kuwaasi oo kala ah:
Nabiyada iyo Rusuusha Ku Xusan Quraanka
(الأنبیاء والرسل في القرآن)
Shaxda Nabiyada iyo Kutubtooda[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Diiwaanka Nebiyada Ku Xusan Quraanka Kariimka ah
Nabi ama Rasuul
Qoomka ama Shacabka
1 Nabi Aadam نبي - Nabi Ugu horeeyay dhamaan dadka iyo Nebiyada
2 Nebi Idriis نبي  - Nabi Nabigii labaad ee dhamaan anbiyada
3 Nebi Nuux نبي  - Rasuul (رسول) Qoomu Nuux (قوم نوح)
4 Nebi Huud رسول  - Rasuul Reer Caad (عاد)
5 Nebi Saalax رسول  - Rasuul Reer Samuud (ثمود)
6 Nebi Ibraahim نبي Suxuf (صُحُف)  Rasuul (رسول) Reer bani Ibraahim ( قوم إبراهيم)
7 Nebi Luud نبي  - Rasuul (رسول) Reer Luud (قوم لوط)
8 Nebi Ismaaciil نبي  - Rasuul (رسول) -
9 Nebi Isxaaq نبي  - Nabi iyo Imaam (إمام) -
10 Nabi Yacquub C.S. نبي  - Nebi iyo Imaam (إمام) -
11 Nebi Yuusuf نبي  - Nebi -
12 Nebi Ayuub نبي  - Nabi -
13 Nebi Shuceyb رسول - Rasuul Reer Madyan
14 Nebi Muuse نبي رسول  Kitaabkii Towraad (التوراة) Nabi iyo Rasuul Reer Fircoon (فرعون وملائيه)
15 Nebi Haaruun نبي  - Nabi Taageerayay walaalkii Nabi Muuse
16 Nebi Dulkifli - - Nebi -
17 Nebi Daa'uud نبي  Kitaabkii Sabuur ( زبور) Nabi -
18 Nebi Suleymaan نبي  - Nebi -
19 Nebi Ilyaas نبي - Rasuul (رسول) iyo Nebi Reer Ilyaas (قوم الياس)
20 Nebi Alyasac نبي  - Nabi -
21 Nebi Yuunus نبي  - Rasuul (رسول) Reer Yoonis (قوم يونس)
22 Nebi Zakariye نبي  - Nabi -
23 Nebi Yaxye نبي  - Nabi -
24 Nebi Ciise نبي  Kitaabkii Injiil  Nabi iyo Rasuul (رسول) Reer bani Israa'iil (بني إسرائيل)
25 Nabi Muxamed نبي Kitaabka Furqaan (قرآن) Nabi iyo Rasuul (رسول)  Dadka oo dhan (جميع الناس)
Qoraalo La Mid Ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ "Nabi sidoo kale loo qoro Nebi"
↑ "ingiriis: Prophet; carabi: ﻧﺒﻲ, "Nabiyu"; wadar الأنبیاء, loogu dhawaaqo "Al-Anbiyaa"; sidoo kale: ﺭﺳﻮﻝ, "Rasuul"; wadar ahaan: الرسل; "Ar-Rasul""
↑ "Tirada Rasuusha ee Alle u soo diray shacabka, qabiilada iyo bulshooyinka dunida aad ayay u faro badan yihiin"
↑ "kitaabka Quraanka Al-Furqaan ee diinta Islaamka waa shan Rasuul"
↑ "sadex Rasuul oonaan aqoon u lahayn kutubta lagu soo dejiyay"
↑ "Kitaabka Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka waxaa ku xusan tiro 25 Nabi iyo Rasuul kuwaasi oo ugu horeeyo aabaheen Nebi Aadam (c.s) uguna dambeeyo nabiga lagu soo khatimay anbiyada iyo rususha waa Nebi Muxamed "
↑ "Quraanka kariimka ee aasaaska u ah diinta Islaamka, Ilaahay sareeye wuxuu soo dejiyay afar Kitaab oo la kala siiyay afar Rasuul"
↑ "*Kitaabka "Al-Furqaan" ee lagu soo dejiyay Nebi Muxamed"
↑ Kitaabka "Injiil" ee lagu soo dejiyay Nebi Ciise
↑ Kitaabka "Towraad" ee loo soo diray Nebi Muuse
↑ Kitaabka "Sabuur" ee Ilaahay ku soo dajiyey Nebi Daa'uud
↑ "diinta Islaamka, diinta Masiixiyada, iyo tan Yuhuuda
↑ "sanadkii 570kii"
↑ "diinta Islaamku xustey, Nebi waa qof nin ah, Nebi Aadam, Alle (s.w) ku soo dejiyay waxyi iyo amar lagu faraayo in uu u digo, wax-baro, isla markaana hogaamiyo reer, qabiil, bulsho, qoom, dad ama shacab asago oo tixraacaya kitaab Rasuul"
↑ "Ras'uul waa waa qof (labka dadka) nin ah ka soo jeeda tafiirtii Nebi Aadam kaasi oo Alle"
↑ "Rasuul kasta waa Nebi, laakiin Nebi kasta ma ahan Rasuul."
↑ "Nebi Muxamed waa Ras'uul iyo Nebi"
↑ Nebi Daa'uud wuxuu ahaa nin Rasuul iyo Nebi ah oo lagu soo dejiyay kitaabka Sabuur
↑ Qur'aan 19:56
↑ Qur'aan ۶:۸۹
↑ Qur'aan ۲۶:۱۲۵
↑ Qur'aan ۲۶:۱۴۳
↑ Qur'aan ۸۷:۱۹
↑ Qur'aan ۱۹:۴۱
↑ 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 Qur'aan ۶:۸۹
↑ Qur'aan ۱۹:۵۴
↑ 29.0 29.1 Qur'aan ۱۹:۴۹
↑ Qur'aan ۲۶:۱۷۸
↑ Qur'aan ۱۹:۵۱
↑ Qur'aan ۱۹:۵۳
↑ Qur'aan ۳۷:۱۲۳
↑ Qur'aan ۳:۳۹
↑ Qur'aan ۴:۱۷۱
↑ Qur'aan - ۵۷:۲۷
↑ Qur'aan ۳۳:۴۰
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasuul&oldid=167124"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Febraayo 2017, marka ee eheed 13:21.